Miadana loatra ary raha efa nahangona vokatra tamina birao miisa 10.000 mahery ireo haino aman-jery dia ny azy mbola 300 monja.
Manodidina izay hatrany, ireo mpanao politika kosa anefa dia saika naneho ny tsy fankasitrahany ny famoahana vokatra mialoha ny fotoana notanterahan’ireo haino aman-jery tsy miankina. Ny zava-tsikaritra dia samy manana ny tarehimarika nasehony, indrindra, ireo fahitalavitra.
Hatreto aloha izany dia azo antoka fa ny kandida laharana faha 13 sy 25 no hiatrika ny fihodinana faharoa izay heverina fa ho halatra bevata raha sanatria tsy hisy. Ny zava-miseho dia samy mamoaka izay vokatra mahamety azy avy anefa ny foiben-toeran’ny 2 tonta.